rando VideoChat ividiyo Incoko Webcam jikelele Incoko”Rush”
Zethu inguqulelo entsha, jikelele VideoChat ifuna ukuba ufuna ukufikelela kunye Google ye-chrome okanye i-Firefox i-Mozilla, njengoko ezi zi browsers ukuba, ngeli xesha, inkxaso umthetho WebTV.
Ukongeza kwi-Intanethi browsers ye-chrome okanye i-Firefox, kufuneka ube kwi-Windows-bume, okanye Linux, okanye Android.
Mhlawumbi-Microsoft Edge kusebenza, mhlawumbi hayi
Wamkelekile yethu entsha jikelele ividiyo incoko ye-Android, apho siza kunikela isantya wokuqala lesibini, ngoko ke ukuba ufuna ukuchitha ngakumbi ixesha uthetha kwaye ixesha lokulinda. Njengokuba novelty, sino kwaquka malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ukudibanisa Incoko kunye VideoChat bonke Android abasebenzisi, njengoko basebenzisa ye-chrome okanye i-Firefox, esibizwa na kunokwenzeka phambi ngenxa sasivuya usebenzisa Ngokukhawuleza Umdlali, apho ayifumaneki kwi-Android, kwaye ebalulekileyo ukuphuhlisa ukuba zonke Android abasebenzisi unako ngoku ukunxulumana zethu Incoko ngokunjalo ukuba abasebenzisi-ofisi kwaye kuya intlanganiso entsha kuba ezimbini. Sino rhoqo wafuna umgangatho wethu cats kwaye sino rhoqo balingwe ukuvumela abasebenzisi mobile izixhobo ukufikelela zonke zethu cats ngendlela efanayo njengoko iimeko-ofisi abasebenzisi. Kengoko njenge yintoni eyenzekayo kwezinye iinguqulelo cats, apho iinguqulelo mobile desktop kwaye ingaba ngokupheleleyo ezahlukeneyo kwaye mobile abasebenzisi andikwazi ukuncokola nge-ofisi abasebenzisi usekela kamongameli kwelinye icala, kuba uninzi iindlela ngxoxo langoku, zimbini iindlela ingaba differentiated, oko kukhokelela a differentiation ukuba khusela abasebenzisi abaninzi ukufumana ukwazi ngokuba bengengabo zidityanisiwe efanayo ngxoxo umncedisi. Ngu zeentloni, ngenxa elungileyo inxalenye ezi amathuba ilahlekile ukuze ukwazi xoxa kunye ngakumbi abasebenzisi ngexesha elinye, kwaye thina isonjululwe kuyo ngale ndlela, kunye ividiyo entsha incoko ukuba imisebenzi kwi HTML ezintlanu, oko akunjalo kufuna nayiphi na enye inkqubo yoncedo, kwaye imisebenzi kunye kuba abasebenzisi phones mobile abasebenzisi desktop iindlela.
Bonke abasebenzisi zihlanganisene enye ividiyo incoko, kunye imisebenzi efana isandi, ividiyo, kwaye okubhaliweyo
Thina regret ukuba iPhone abasebenzisi ingabi nako thatha ithuba yethu entsha VideoChat, ngenxa iimfuno kwaye impositions ka-inkcazo emfutshane ngendlela yayo iOS yokusebenza, nto leyo kakhulu restrictive ngokunxulumene i-interoperability WebTV, nto leyo essentially Unxulumano Unako phakathi abasebenzisi, ekuphuculeni isantya ye-noqhagamshelwano kunye umgangatho enesandi kwaye ividiyo kwi-vidiyo incoko. Thina musa ukulindela ukuba inkcazo emfutshane utshintsho yayo restrictive imigaqo-nkqubo kwixesha elifutshane, ngenxa yokuba isiganeko yaziwa njenge Eyenzekayo, ubusela of personal imifanekiso kwi-inkcazo emfutshane ke iiseva yenzekile, ingaba na uncedo inkcazo emfutshane ukuphucula yayo ukhuseleko imigaqo-nkqubo ukumiselwa protocols WebTV, apho unako ukunceda ukuphucula unxibelelwano yayo abasebenzisi. Ngexesha inkcazo emfutshane modifies ayo ukuba imigaqo-nkqubo zethu Incoko imisebenzi kwi iPhone, VideoChat kuba iPhone iya kuba ulungile kwi-shortest kunokwenzeka ixesha. Lo msebenzi zethu ezitsha jikelele ividiyo incoko kakhulu ilula, kodwa sisebenzisa ke kukunika abanye izakhelo yalo msebenzi, kuba akukho mathandabuzo. Kuyenzeka ukuba imiselwe yakho izinto ezikhethekayo ze-ngokunqakraza kwi zilandelayo iqhosha: ulawulo yolawulo lwethu videochat yindlela elula, nje bona ehamba nale leta umboniso ukubona ezahlukeneyo ezibini: xa izicwangciso ichaziwe kwi-iinketho, uyakwazi ngokulula umva main menu kwaye nqakraza Qala ukuqala chatting kunye nabantu kunye yakho uphendlo nkqubo kwaye yakho umdla. Zethu VideoChat rando lusekelwe WebTV, nto leyo essentially uxhulumaniso Unako, kubalulekile ukuba umsebenzisi kunye umsebenzisi ngqo, ngaphandle intermediation ka-wangaphandle abancedisi, ngoko ke ngu-hayi ephakathi ngenxa clean kwemida yeli iteknoloji, ukusukela oko akunakwenzeka ukuba athathele zonke ushicilelo oluneenkcukacha-abasebenzisi ngenxa yale simele ukunxulumana kunye ngamnye kubo, yi-limiting ixesha ngxoxo ukuba abasebenzisi bamanzi.
Ke ngoko, sebenzisa zethu Ividiyo Incoko kunye kakuhle ngenxa yokuba andazi ngubani kwelinye icala ikhamera
Kufuneka sibe kanjalo kukwazisa ukuba, umhla wethu, kuyenzeka ukuba umsebenzisi othe ufikelelo lwakho webcam unako mbali iyaphephezela kuyo. Ngenxa yesi sizathu, logic uthi asikwenzi nantoni na wethu VideoChat jikelele ukuba ufuna avume ukwenza kwi-real ihlabathi, ukususela unako ukusindiswa. Zininzi iinkqubo kwi-Intanethi ukuba uza falsify i-uphawu a webcam, ziphakathi kakhulu kakuhle-ezaziwayo ingaba Iibhonasi Webcam kwaye Manama, esinokusetyenziswa ukuthumela ividiyo uphawu ngaphambili **** ukwenza omnye ukuba umntu olilungu uthetha nge Justin Bieber (nangona kubonakala ukuba lento a joke, oku sele yenzekile amaxesha amaninzi).Ngokufanayo, siza kukunika abanye ezisisiseko tips for yakho amava kwi-incoko jikelele yi best kunokwenzeka: Yethu entsha inguqulelo videochat kwi HTML ezintlanu ifuna ukuba unikezelo nge-Google ye-chrome okanye i-Firefox i-Mozilla (kufuneka), ngoba la ngamazwi browsers ukuba okwangoku inkxaso umthetho WebTV, evumela abasebenzisi kunxibelelana ngqo, kunye a umgangatho wevidiyo kwaye ukuphucula evakalayo. Ukongeza kwi-Intanethi browsers ye-chrome okanye i-Firefox, kufuneka ube kwi-Windows-bume, okanye Linux, okanye Android
← Indlela flirt kwi chatroulette kwaye bazoocam - Ibhodi Seduction Xh
Imiqondiso nisolko Dating i-Arab kubekho inkqubela →